Ngwa kachasị mma ịchọta ala dị mfe | Androidsis
Ngwa 5 kachasị mma ịchọta ala
Ọ na -esiwanye ike ịchọta ụlọ maka mgbazinye. Ọnụ ahịa na -arị elu ma na -agbago elu maka mgbanwe maka ụlọ na -adịghị mma, na ndị nọ n'ọnọdụ dị mma na -ebiri ngwa ngwa tupu akpọsa ya. Ihe ndị a niile gbakwunyere n'eziokwu na a na -enwe ọtụtụ ụlọ ndị njem na ọtụtụ ndị ọzọ maka ndị nwe ha n'ihu nrụrụ ma ọ bụ mmebi, na -eme ka ọ sie ike ịchọta ụlọ. Ọ bụ ya mere o ji adị mma mgbe niile ịnweta enyemaka nke ngwa ịchọta ụlọ. Site na ha ị ga -enweta ọkwa na ozugbo ha na -ebuli ụlọ maka mgbazinye ma ị ga -enwe ike ịkpọtụrụ ya ka ọ nwee oge ị ga -ahụ ya.
Taa, anyị na -ewetara gị nchịkọta nke ngwa kachasị mma ịchọta ụlọ na Spain. Ha bụ ndị nwere ọtụtụ ụlọ maka mgbazinye na, ewezuga n'obodo nta, n'ozuzu ụlọ maka mgbazinye na -arị elu kwa ụbọchị.
1 Maka mgbazinye
Maka mgbazinye ego lekwasịrị anya naanị na mgbazinye ụlọ. N'adịghị ka ngwa ndị ọzọ, ị gaghị ahụ ụlọ maka ire ere, mana ụlọ maka ogologo oge ma ọ bụ ọnwa. O nwere ọdụ data pere mpe karịa nhọrọ ndị ọzọ yana ọnụọgụ mgbasa ozi dịkwa obere. Ọ ka bụ nhọrọ dị mma ma ọ bụrụ na ị na -achọ ụlọ dị larịị ma nwee ohere ịchọta ezigbo ụlọ ebe ọ bụ na ụfọdụ ndị nwe ụlọ na -ahọrọ ibugo ego mgbazinye ha n'elu ikpo okwu a.
Ngwa 8 kachasị mma iji kesaa ụlọ dị na ekwentị gị
Ọdịdị nke ibe a dị mfe iji. Iji chọọ ụlọ ị ga -ahọrọ naanị oge ịchọrọ ịgbazite, ma ọ dị ogologo ma ọ bụ ọnwa, tinye ebe ịchọrọ ụlọ a, ị nwekwara ike họrọ ọnụ ụlọ na ọnụ ahịa kacha mma ịchọrọ.
Mgbe ị nwere nsonaazụ ọchụchọ ị nwere ike ịtọ ụfọdụ nzacha wee dozie nsonaazụ ya site na njirisi dị iche iche n'elu ikpo okwu. N'ụlọ ọ bụla, ị ga -enwe ike ịhụ nchịkọta na foto (nke ị nwere ike gafee ịhụ ha niile), nkọwa, ọnọdụ, ọnụahịa, mita square, ọnụ ụlọ, wdg.
Ọ na -enye sistemụ ịmụrụ anya ka a ga -ezitere gị ihe ngosi ozugbo site na email mgbe ebipụtara ụlọ ọhụrụ maka mgbazinye nke ị họọrọ dabere na mkpa gị.
Maka mgbazinye - Ụlọ maka mgbazinye
Developer: Maka mgbazinye mgbazinye n'ịntanetị SL
Badi bu ibe oma ozo ezigbo weebụ na ngwa ịgbazite ụlọ mana ọ bụrụ na ị na -achọ ime ụlọ. Ebumnuche ya abụghị maka mgbazinye nke ụlọ zuru oke mana maka ịgbazite ụlọ ịkekọrịta ọnụ ụlọ. N'ime ya ị nwere ike ịhụ ndị kacha ewu ewu, lee foto nke ụlọ ị ga -agbazite yana hụ nkọwa ya.
Na ụdịdị Ị nwere ike ịhụ nha ụlọ ahụ, ọnụ ọgụgụ ụlọ, ime ụlọ ịsa ahụ, ọrụ ọ gụnyere dị ka ndozi ma ọ bụ nhicha. Ha kwesịkwara ịgụnye nkọwa ndị ọzọ dị mkpa dịka ọ bụrụ na enwere WiFi, telivishọn, kpo oku, igwe ịsa ahụ, wdg.
Badi - entlọ ụlọ ma ọ bụ ime ụlọ gị
Pisos.com bụ ibe ọzọ dị ezigbo mma ịchọta ezigbo ụlọ mgbazinye. Ọ nwere ụdị pere mpe pere mpe yana ọtụtụ nzacha ọchụchọ ka anyị nwee ike hichaa nke ọma maka mkpa anyị. Ọ gụnyere igwe nchọta nwere maapụ mmekọrịta yana ọtụtụ ozi ndị ọzọ iji chọta ezigbo nsonaazụ ozugbo enwere ike. Anyị nwere nhọrọ nke ịchọ ma na Spain ma na mba ofesi ma ọ bụrụ na anyị ga -akwaga maka ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ.
Faịlụ ihe onwunwe gụnyere ọtụtụ ozi ọ bụghị naanị maka ọnụnọ a na -akwụ ụgwọ kamakwa ebe dị mma n'obodo. Anyị nwere ike chekwaa ọchụchọ ndị anyị na -eme na mgbakwunye na ọrụ dị oke egwu nke anaghị etinye na webụsaịtị ndị ọzọ dị ka mgbako mgbazinye yana obodo ndị ọrụ na -etinye ọnụ ahịa ha.
Ọ bụ otu n'ime webụsaịtị kacha mma mgbe ị na -achọ ụlọ maka mgbazinye ma ọ bụ kwa ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta, ebe enwere ụlọ na -enye nhọrọ abụọ. Mana na mgbakwunye na ụlọ maka mgbazinye ị nwekwara ike ịhụ ụlọ, ogige, ụlọ nkwakọba ihe, ala, ebe ndọba ụgbọala na ụlọ nchekwa.
flats.com - ụlọ na ụlọ
Milanuncios na -enye ụdị ihe niile, yana kwa mgbasa ozi maka ụlọ maka mgbazinye. N'adịghị ka ibe weebụ ndị ọzọ, Milanuncios abụghị ọkachamara na ụlọ.
N'ime isi peeji ị nwere ike ịhụ ngalaba ala na ụlọ na n'ime ya ọtụtụ edemede. Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji webụsaịtị a, anyị ga -ahọrọ ụdị ụlọ anyị na -achọ, dị ka ewepụghị, wee jiri ihe nzacha chọta mgbasa ozi dabere na mkpa anyị.
Na nzacha anyị nwere ike họrọ ọtụtụ nhọrọ dị ka ịzụrụ, ịgbazinye ego, mgbanwe ma ọ bụ ịkekọrịta, ụdị ụlọ, nke mpaghara, obodo na mpaghara. Yanakwa ọnụ ahịa, ọnụ ọgụgụ ụlọ ihi ụra, ime ụlọ ịsa ahụ, opekata mpe na nke kacha mita, wdg. Mgbe ị nyochachara ya, ị nwere ike ịhụ mgbasa ozi dị ebe ahụ yana ha niile nwere obere nchịkọta ụlọ ọ bụla ebe etinye foto, nkọwa, kọntaktị, wdg. Mgbe ịpịrị ya, ị ga -enwe ike ịnweta faịlụ ahụ yana ozi niile bara uru gbasara ụlọ ahụ.
Milanuncios: Aka nke abụọ
Fotocasa bụ webụsaịtị mgbasa ozi nke abụọ eji na Spain. Ọ bụkwa ọkachamara n'ahịa ụlọ na mgbasa ozi gụnyere ụdị ụlọ niile, ogige, ọfịs, ebe ndọba ụgbọala, ụlọ nchekwa ma ọ bụ ọbụna ụlọ zuru oke.
Injin ọchụchọ gị na -enye gị ohere ịchọ n'ụzọ a kapịrị ọnụ ụdị ihe owuwu ahụ ị na -achọ, mpaghara ịchọrọ ịgbazite, zụta, kerịta ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na -achọ mgbazinye ezumike. Mgbe ịhọrọ nhọrọ niile, ịnwere ike itinye nzacha ọchụchọ ka ịchọta ihe akọwapụtara nke dabara na mkpa gị.
Ị nwere ike họrọ ma ịchọrọ ịhụ nsonaazụ ya n'ụdị ndepụta, grid foto ma ọ bụ maapụ ebe ị nwere ike ịhụ ụlọ ndị ahụ. Onye ọ bụla kwuru na -enye gị ozi onye nwe ya dere dị ka ọnụ ụlọ, ime ụlọ ịsa ahụ, mita square ma ọ bụ foto nke ihe. Ị nwekwara ike ịchọta mpempe akwụkwọ ebe ị nwere ike ịkpọtụrụ onye nwe ya.
I nwekwara ike mepụta mkpọsa maka ọchụchọ gị mgbe ị debanyere aha na weebụ. N'ụzọ dị otu a, ị ga -enweta ọkwa site na email ma ọ bụ na ekwentị mkpanaka gị ma ọ bụrụ na ibudatara ngwa ahụ oge ọ bụla etinyere mgbasa ozi mgbazinye na njirisi ị tọrọ. Usoro a nwere ike inye nsogbu mgbe ụfọdụ yana ọkwa mgbe ụfọdụ nwere ike were awa ole na ole ka ebipụtachara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ngwa 5 kachasị mma ịchọta ala
Otu esi agbanye ihuenyo mkpanaka na -emetụghị bọtịnụ aka
Huawei's EMUI 12 bụ nke gọọmentị wee bịa na ọtụtụ mgbanwe na ndozi